Fiarahamonina Teratany Ao Paragoay Manohitra Ny Tohodrano Lehibe Indrindra Manerantany Famokarana Herinaratra · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Fernando Ferreira, Kurtural Nandika (en) i Laura Vidal, Vero
Voadika ny 05 Janoary 2018 8:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Français, Deutsch, Español
Niverenan'ireo Ava Guarani teny amin'ny taniny izay nalain'ny tohodrano famokarana herinaratra Itaipú tamin-dry zareo, izay notenenin'izy ireo fa mety ho ampiasainy manontolo, kanefa, antsasak'ilay tany ihany no nampiasain'izy ireo. Sary: Zulema Malky. Fampiasàna nahazoana alàlana
Famintinana ny andian-dahatsoratra nataon'i Kurtural ito lahatsoratra ito ary naverina natonta sy navoakan'ny Global Voices miaraka amin'ny alalana sy fandraisana anjaran'ireo mpanoratra ao aminy. Ampahany manokatra ny andian-dahatsoratra “Tsy mandeha any amin'ny tsena goavana ireo izay voaroaka“, izay mipoitra eo amin'ny tranonkala voalohan'ny Global Voices
Efa niady mba hijanonany hipetraka eo amin'ny tanindrazany ny vahoaka Ava Guarani avy ao Sauce hatramin'ny nanamboarana ilay tohodrano famokarana herinaratra . Tamin'ny taona 80, rehefa avy nampanantenaina fa afaka hiverenan'izy ireo ny taniny rehefa mihena ny rano avy ao amin'ilay tohodrano, nalefa niaina lavitra ilay hany loharano tokana izay nilainy mandrakariva tamin'ny fiainany ilay vondrom-piarahamonina — ny renirano Paraná. Tamin'ny 2015, taona maro taorian'ny niainana lavitry ny fonenany, nanapaka hevitra ny hiverina eny amin'ny sisin'ny reniranony izy ireo, ary na nisy aza ny fandroahana mahery setra avy amin'ny manampahefana, mitaky ny zony eo amin'ny tany izay nasaina nialan'izy ireo taona maro lasa izay ireo Ave Guarani.
Fandroahana tsy nampoizina
Tamin'ny 2016, fanindroany no nahitan'i Cristóbal Martínez ny vondrom-piarahamoniny noroahan'ilay tohodrano famokarana herinaratra Itaipú, anisan'ireo tohodrano lehibe manerantany mpamokatra herinaratra. Fiarahamonina manana fifandraisana ara-panahy mahery amin'ireo renirano manodidina ny taniny ny vahoaka Ava Gurani avy ao Sauce ao amin'ny departemanta Alto Parana ao Paragoay (midika hazo malahelo koa ny ‘Sauce’ amin'ny teny Espaniola). Rehefa tonga ny fandroahana, voatery nijery an'ireo polisy mandoro ny tranony ry Martinez sy ny olony. Niafina niaraka tamin'ny entany teny amin'ny toerana lavitry ny tanindrazany, nahita ny tapỹi-ny (ny vohitr'izy ireo) lasa lavenona. Tsy nifanalavitra tamin'ny fandroahana farany ny zavamisy, izay nanery azy ireo niala an'i Sauce 30 taona tany aloha. Tamin'ity kosa, tsy vitan'ny Ava Gurani ny handao ny sisin'ny renirano Paraná izay antsoin'izy ireo hoe fonenana.
Naka fialofana teo akaikin'ny renirano teo amin'ny toerana nipetrahany hatramin'ny taona 80 ireo lehilahy, vehivavy, ankizy ary ireo antitra. Ho an'ny vahoaka Guarani, toerana ahafahan'izy ireo mifaly, toerana izay handehanan'ny rano be dia be ny Yvy Marãe'ỹ (“tany tsy misy devoly”). Ho an'ny Ava Guarani, avy ao amin'ny reniranon'ny Paraná no fiavian'izay rano izay, ny faharoa lava indrindra ao Amerika Atsimo.
Tamin'ny 30 Septambra 2016, taorian'ny andrana fandroahana, andiana fiara roa ambin'ny folo an'ny Vondrona Manokana mpanao hetsika avy amin'ny Polisy Nasionaly (GEO), Polisy mpitaingina soavaly ary mpiasam-panjakana avy ao amin'ny Ivon-toerana ho an'ny vazimba teratany Paragoanina (INDI) no tonga tao am-bohitra mba hanamarina ny fiadanan'ny Ava Guarani, saingy nijanona niafina ilay vondrom-piarahamonina.
Ho an'i Martinez, mpitarika ito vondrom-piarahamonina ito, efa lalina ny tsy fahatokisana ny manampahefana. Nananatra azy ny tantara fa tsy misy dikany ny tenin'ireo olona fotsy ireo ary mampidi-doza ny lainga soratana amin'ny taratasy. Tamin'ny 13 Septambra 2016, nanao sonia didim-pitsarana momba ny fandroahana azy ireo ny mpitsara Emilio Gómez Barrios. Nodidian’i Gómez Barrios ny fandroahana azy ireo ho toy ny vokatry ny fangatahan'ny Germán Hutz, mpamokatra soja matanjaka ary zaodahin'ny Filoha lefitra Paragoaianina Juan Afara.
Nanomboka 2015, tamin'ny fiverenana voalohan'ny vondrom-piarahamonina ho eny Sauce, nahazo fandrahonana betsaka ary tolotra kolikoly maromaro i Martínez. 50,000$ US no ambony indrindra tamin'izy ireny, vola natolotry ny irak'i Hutz. Niteny i Martínez fa notoloran'ny INDI vola sy tany kely eo amin'ny ampahana faritra honahona izy, izay nolaviny.
Betsaka ny hetsika famonjena ny biby natao teo an-toerana nandritra ireo taona nanamboarana ilay tohodrano, kanefa, tsy misy resaka momba ny vonjy ho an'ilay vondrom-piarahamonina nafindra toerana. Sary: Zulema Malky. Nampiasaina miaraka amin'ny fanomezandàlana.
Ny nipoiran'ilay orinasa goavana iraisan'ny firenena roa
Ilay tohodrano Itaipú famokarana herinaratra no famantarana fivoarana lehibe indrindra ho an'ny fitondrana jadon'i Alfredo Stroessner. Tamin'ny Aprily 1973, nosoniavin'i Stroessner ny fifanarahana momba ny Itaipú niaraka tamin'ny Jeneraly Garrastazú Médici, filohan'i Brezila tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany, midika findramana vola betsaka ny dindon'i Etazonia eo amin'ny fitondrana jadon'ny miaramila ao Amerika Latina ary tsy miavaka amin'izany i Itaipú. Vetivety dia tonga ny vola nindramina ary tafatsangana ny tohodrano.
Tahaka izao no nametrahan'ny fikambanam-barotra Paragoaianina-Brezilianina ny tenany ho tetikasa lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'ireo firenena roa.
Amin'ny ankapobeany, vondrom-piarahamonina teratany miisa 38 — fianakaviana 688 — no nafindra toerana avy tao amin'ny faitra fonenany vokatry ny fakàna ny 165.000 hektara ho an'ny fanamboarana ilay tohodrano Itaipú hamokarana herinaratra. Nampiseho porofo ny tatitra iray avy tao Itaipú ihany fa tsy nanome onitra ho an'ny Ava Guarani ny tetikasa Itaipú ary, na nafindra tamin'ny taniny aza izy ireo, tsy nampiasa afa-tsy ny antsasaky ny toerana izay ary ireo teo aloha.
Betsaka ny hetsika famonjena ny biby natao teo an-toerana nandritra ireo taona nanamboarana ilay tohodrano, kanefa, tsy misy resaka momba ny vonjy ho an'ilay vondrom-piarahamonina nafindra toerana na mba nisy firesahana ireo fifanarahana natao tamin'ireo vondrom-piarahamonina ireo tany anaty tatitra.
Nahilika tsy ho tao anatin'ny ankilany Paragoaianina tamin'ilay tatitry ny Komitin'ny Fahamarinana sy ny Rariny izay noforonina teo anelanelan'ny 2002 sy 2008 ny zava-tsarotra niainan'ireo Ava Guarani, tao anatin'ny ezaka hanomezana ny rariny ho an'ireo niarahan'ny fitondrana jadona.
Teraka eny amoron'ny Paraná indray ny hazo malahelo.
Tsy nanadino ny fampanantenana natao azy ireo ny mponina tao am-bohitra rehefa namboarina ilay tohodrano, hoe miverina aminy ny tanin'izy ireo. Rehefa henon'izy ireo ny siosion'ny fisian'ny tanim-panjakàna mirefy 1.000 hektara eo ampitan'ny toeram-pitahirizana voajanahary Limoy ao Itaipú, nanapaka ny hanararaotra ary hiverina izy ireo.
Tamin'ny Aogositra 2015, 30 taona mahery taty aoriana, niverina teny amin'ny Sauce izy ireo. Namerina nanangana ny tranony, ny toeram-piompiana, ny fakana ranony, ny tranon'akohony ny fianakaviana. Sauce vaovao no teraka indray ary toy izay koa ny fiainan'ny Ava Guarani eo amin'ny taniny tamin'ny voalohany.
Am-polotaona maro taorian'ny nandroahana azy tao amin'ny taniny, niverina teo amin'ny taniny ny vonrom-piarahamonin'ny Sauce mba hiaro ny zony hiaina am-pifanarahana amin'ny renirano. Sary: Zulema Malky, nampiasaina miaraka amin'ny fahazoandàlana.
Tamin'ny 2015, nanomboka niresaka tamin'ireo manampahefana ilay vondrom-piarahamonina. Kanefa, taona iray taorian'ny fandroahana mahery setra tamin'ny 2016, nandao ny latabatry ny fifampiresahana ilay vondrom-piarahamonina satria tsy nisy nitàna ny fampanantenany ireo andrim-panjakana. Tohizan'izy ireo ny mitaky ny Firenena hanefa ny adidiny ary manome azy ireo ny famerenana tanteraka ny farianiny.
Ny fiveloman'ilay vondrom-piarahamonina no laharampahamenana voalohany izao ary izany no mahatonga ireo mpikambana ao aminy hiasa eo amin'ireo tany ireo. Ho an'ny Ava Guarani ao Paraná, tsy afaka eritreretina ny hanaiky fifanarahana izay efa tapaka.